စစ်ဘေးရှောင်ပြီး အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကို အဝတ်အထည်နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေထက်လင်း – Cele Top Stars
စစ်ဘေးရှောင်ပြီး အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကို အဝတ်အထည်နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေထက်လင်း
April 1, 2021 By admin2News
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်မှုတွေနဲ့ အက်ရှင် ဇာတ်ကားကြမ်းကြမ်းတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို နှစ်အတော်ကြာတဲ့အထိအခိုင်အမာရရှိထား သူကတော့ ဝါရင့်အနုပညာရှင်မင်းသားကြီး နေထက်လင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ နေထက်လင်းကတော့ လှူဒါန်းမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်ကာ တတ်နိုင် တဲ့ဘက်ကနေ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ အသက်ပေးကျဆုံးသွားကြတဲ့ လူငယ် သူရဲကောင်းတွေအတွက်လည်း စိတ်ထိခိုက်ခံစားနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ပြည်သူအတွက်အားဖြည့်ပါဝင်နေတဲ့ နေထက်လင်း ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် အဝတ်အထည်နဲ့ အသုံးအေ ဆာင်ပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်..။
စစ်ဘေးရှောင်ပြီး အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အဝတ်အထည်၊ စာရေးကိရိယာ၊ ကလေးများအတွက်အရုပ်နဲ့ အခြားအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေကို အခြားအလှူရှင်တွေနဲ့အတူ စုပေါင်းပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ “ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ မဏီရတနာကျောင်းတိုက်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသော ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွင် ဒီကနေ. အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီးအားအမှူထား၍ ရန်ကုန်အလိုတော်ပြည်ကျောင်းတိုက်ရှိ လက်ထောက် ဆရာတော် ဦးဇင်းဘီလူး(ခ)ရှင်ကုမာရ နှင့်
ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် နေထက်လင်း/ဆုဒါလီ/ကိုသန်းဆွေ/ကိုရိုင်တာနှင့်ကွီးဖိုးဇော်တို့မှာ လူကြီးနှင့်ခလေးများအတွက် အဝတ်အထည်/စာအုပ် စာတန်း/ခလေးရုပ်များ/ကလေးတွေနဲ.ပတ်သက်သော အရာများစွာကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ လှူဒါန်းမှူအစုစုတို့ကို သာဓု၃ကြိမ် ခေါ်စေသော် 🙏🙏🙏 ယနေ့ စစ်တွေမြို့ရှိ စစ်ဘေး/တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများ ခိုလှုံနေရာတွင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေး ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အနန္တသတ္တဝါတွေ ဘေးရန်ကင်းပချမ်းသာကြပါစေ။ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ🇲🇲😍🙏..” ဆိုပြီး အလှူအကြောင်း ကို အသိပေး ပြောပြထားတာပါ..။ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းဖေးမကူညီမှုတွေနဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နေထက်လင်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေကတော့ နှစ်သက်ကြည်နူးစရာကောင်းတာမို့ ပရိသတ်တွေလည်း သာဓုခေါ်ဆုတောင်းပေးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
Photo Credit – ဖိုးဇော် Fb Acc
ပရိသတျကွီးရေ.. သရုပျဆောငျပိုငျနိုငျမှုတှနေဲ့ အကျရှငျ ဇာတျကားကွမျးကွမျးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုတှကေို နှဈအတျောကွာတဲ့အထိအခိုငျအမာရရှိထား သူကတော့ ဝါရငျ့အနုပညာရှငျမငျးသားကွီး နထေကျလငျးပဲ ဖွဈပါတယျ..။ နထေကျလငျးကတော့ လှူဒါနျးမှုတှဆေကျတိုကျပွုလုပျကာ တတျနိုငျ တဲ့ဘကျကနေ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ရပျတညျနတောဖွဈပွီး တျောလှနျရေးတိုကျပှဲကွီးမှာ အသကျပေးကဆြုံးသှားကွတဲ့ လူငယျ သူရဲကောငျးတှအေတှကျလညျး စိတျထိခိုကျခံစားနရေတာလညျး ဖွဈပါတယျ..။ လှူဒါနျးမှုတှနေဲ့ တဈဖကျတဈလမျးကနေ ပွညျသူအတှကျအားဖွညျ့ပါဝငျနတေဲ့ နထေကျလငျး ကတော့ ရခိုငျပွညျနယျစဈတှမွေို့ပျေါမှာရှိတဲ့ စဈဘေးရှောငျပွညျသူတှအေတှကျ အဝတျအထညျနဲ့ အသုံးအေ ဆာငျပစ်စညျးတှေ လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ..။
စဈဘေးရှောငျပွီး အခကျအခဲတှနေဲ့ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ကွေရတဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ အဝတျအထညျ၊ စာရေးကိရိယာ၊ ကလေးမြားအတှကျအရုပျနဲ့ အခွားအသုံးအဆောငျ ပစ်စညျးတှကေို အခွားအလှူရှငျတှနေဲ့အတူ စုပေါငျးပွီးကိုယျတိုငျကိုယျကြ သှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ..။ “ရခိုငျပွညျနယျ စဈတှမွေို့ပျေါရှိ မဏီရတနာကြောငျးတိုကျရှိ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားအတှကျ ဖှငျ့လှဈထားသော ကယျဆယျရေး စခနျးတှငျ ဒီကနေ. အလိုတျောပွညျ့ဆရာတျောကွီးအားအမှူထား၍ ရနျကုနျအလိုတျောပွညျကြောငျးတိုကျရှိ လကျထောကျ ဆရာတျော ဦးဇငျးဘီလူး(ခ)ရှငျကုမာရ နှငျ့
ရုပျရှငျနှငျ့ ဗီဒီယိုသရုပျဆောငျ နထေကျလငျး/ဆုဒါလီ/ကိုသနျးဆှေ/ကိုရိုငျတာနှငျ့ကှီးဖိုးဇျောတို့မှာ လူကွီးနှငျ့ခလေးမြားအတှကျ အဝတျအထညျ/စာအုပျ စာတနျး/ခလေးရုပျမြား/ကလေးတှနေဲ.ပတျသကျသော အရာမြားစှာကို သှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။ လှူဒါနျးမှူအစုစုတို့ကို သာဓု၃ကွိမျ ချေါစသေျော 🙏🙏🙏 ယနေ့ စဈတှမွေို့ရှိ စဈဘေး/တိုကျပှဲရှောငျပွညျသူမြား ခိုလှုံနရောတှငျ ထောကျပံ့ပေးနိုငျရေး ကွိုးစားဆောငျရှကျခဲ့ပါသညျ။ အနန်တသတ်တဝါတှေ ဘေးရနျကငျးပခမျြးသာကွပါစေ။ မွနျမာပွညျကွီး အမွနျဆုံးငွိမျးခမျြးပါစေ🇲🇲😍🙏..” ဆိုပွီး အလှူအကွောငျး ကို အသိပေး ပွောပွထားတာပါ..။ တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြးဖေးမကူညီမှုတှနေဲ့ လှူဒါနျးမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ နထေကျလငျးရဲ့ ပုံရိပျတှကေတော့ နှဈသကျကွညျနူးစရာကောငျးတာမို့ ပရိသတျတှလေညျး သာဓုချေါဆုတောငျးပေးထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။
Photo Credit – ဖိုးဇျော Fb Acc
စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၁၃၀) ကျော်အတွက် လိုအပ်တဲ့စားသောက်ကုန်တစ်ချို့ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စူးရှထက်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာတွေစုပေါင်းပြီး ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ပန်းစည်းနဲ့ငွေသားအချို့လာရောက်ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တဲ့အတွက် အတိုင်းမသိပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဟန်လေး